Biggest Badasses Of Myanmar Journalism | Lionslayer : The Legend
2 Responses to “Biggest Badasses Of Myanmar Journalism”
ဟိုးအရင်တုန်းကတော. new light of myanmar မှာ source ကို xinhua လို. ဖော်ပြတယ်ဗျ။ အရင်တုန်းက ကျွန်တော် တခေါက် ဖတ်ဖူးတာက သတင်းစာတွေမှာ xinhua ရယ်၊ နောက် သတင်း ဌာန တချို.ရယ်ကနေ ကြေးမုံ၊ မြန်မာ.အလင်း၊ New Light သတင်းစာမှာ ပြန်ဖော်ပြခွင်. လိုင်စင် ယူထားပါတယ်။ ဒီတိုင်း ကူးယူတာတော. မဟုတ်ပါဘူး။ နောက်ပိုင်းတော. မပြောတတ်ဘူး။ အယ်ဒီတာတွေကလဲ အလွယ်လိုက်ကုန် ကြပြီ။ source ကို သေချာ မရေးတော. မသိရင် သူများဟာကို ကူးယူသလို ဖြစ်နေတယ်။ လိုင်စင် မ၀ယ်တော.တာလဲ ဖြစ်ရင် ဖြစ်မှာပေါ.။
Sure, most int’l news in New Light of Myanmar are from Xinhua or Reuters. Still, I frequently see using internet as news source.